वारम्बार रिस उठ्छ, यस्ता छन् रिस नियन्त्रण गर्ने उपायहरु
मे 27, 2019 मे 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments उपायहरु, रिस
भनिन्छ रिस हो मानिसको शत्रु, रिसैले सव नासिने, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सव भासिने । त्यसैले मानिसले रिसलाई नियन्त्रण गर्नु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । रिस ज्यादै शक्तिशाली भाव हो । रिसाएका बेलामा आफूलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ । रिसको झोंकमा धेरै कुटपिट, हिंसा र हत्या हुने गरेका छन् । कहिलेकाहीं त कसरी यति धेरै ठूलो घटना भयो भन्ने पनि रिसाएको मानिसलाई थाहा हुँदैन । रिसकै कारण घरमा कुटपिटका घटना हुन्छन् र कहिलेकाहीं सिकिस्त हुने गरी कुटपिट गर्ने, मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने र कसैको ज्यान समेत लिने प्रयास भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै गरेर परिवारमा कलह, झगडा, अनमेल, पारपाचुके र केटाकेटीमा ज्यादै नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने प्रमुख कारण पनि रिसाउने, झगडा गर्ने र कुटपिट गर्ने हो। रिस नियन्त्रण गर्ने उपायहरु निम्न अनुसार छन् ।
यदि तपाईलाई रिस उठेको छ भने एक देखि सयसम्म गन्नुस्। रिसले चुर नै हुनुभएको छ भने एकदेखि एकसम्म गन्नुस्। ती गन्ती गन्दा बिस्तारै तपाईंको रिस पनि मर्दै जान्छ ।
व्यायामले नसाहरूलाई संयमित पार्नुका साथै रिसलाई पनि कम पर्छ । हिँड्ने बानी गर्नुहोस्, बाइक चलाउनुहोस् वा केही खेल खेल्नुहोस् । आफ्ना अंगहरूलाई सक्रिय बनाइ राख्नुहोस् । त्यसले शरीर र दिमागलाई राम्रो गर्छ ।
४. सिर्जनात्मक कुरा अपनाउनुहोस्
तपाईंको रिसलाई सिर्जनात्मक कुरामा लगाउनुस् । मुड अफ भएको बेला जस्तै पेन्टिङ, गार्डेनमा समय बिताउनुहोस् या केही गीत, कविता कोर्न सक्नुहुन्छ । रिस उठेको बेला आफ्नो सिर्जनात्मक सीपलाई प्रयोग गर्नुहोस् ।
रिस लागिरहेको छ भने घाँटी तथा जिउ तन्काउनुहोस् । कुनै योगको आसन गर्नसक्नुहुन्छ, जसले शरीर र भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्छ । यति गर्नलाई अरु केही सरसमानका जरुरत पर्दैनन् ।
संगीत कसलाई मनपर्देन र? राम्रो गीत सुनियो भने मुड अन हुन्छ । रिस उठेको बेला आफूलाई मनपर्ने गीत सुन्नुस् र आफ्नो भावना बहलाउनुहोस् । इयरफोन लगाएर सुन्नुस् या कोठामा घन्काएर सुन्नुस् । मुड फ्रेस बनाउनहोुस् यसले तपाईंको चिन्ता रिस छिनभरमै हराउन मद्दत गर्छ ।
तात्तातो रिसको बेला मान्छेले जथाभावी बोल्न थाल्छ यसले राम्रो होइन आफैलाई हानी पुयाउँछ । रिस उठिराखेको बेला केही शब्द भन्न लागेपनि मान्नुस् की तपाईको ओठमा गम टाँसिएको छ, बोल्न सक्नुहुन्न । यसरी चुपचाप भएको बेला तपाईंले गलत या सही छुट्याउन समय पाउनु हुन्छ ।
आफूलाई समय दिनुस् । अरुभन्दा अलग बस्नुहोस्। यतिबेला सम्म रिस शान्त भएर तपाई सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्नुहुन्छ । यो तपाई दैनिक तालिकाको रुपमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
जुन कुराले रिस उठेको छ त्यही कुरामा नझुन्डिनराख्नुस् । आफ्नो विश्वासिलो र सहयोगी मित्रलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्नुस् जसले गर्दा तपाईको असन्तुष्टिलाई नयाँ मोड दिन सक्छ ।
खराब मुड जस्तो नराम्रो त अरु के हुन सक्ला र आफ्नो रिसलाई शान्त पार्न हसाउने र रमाइलो कुराको खोजीमा लाग्नु हो ।
तपाईंलाई जसले रिस उठाएको छ उसलाई चिठी या इमेल लेख्नुहोस् र फेरि डिलिट गर्दिनुहोस् । आफ्नो मन लागेको कुरा ओकल्दा त्यो कसैले सुनोस् वा नपढोस् मन आनन्दित बनाउँछ ।
१४. केही मनपरेको शब्द मन्त्रको रुपमा उच्चारण गर्नुहोस्
आफूले मन परेका शब्द वा वाक्य खोज्नुहोस् र त्यसमा एकाग्र हुने कोसिस गर्नुहोस् । त्यो शब्द मन्त्रको रुपमाबारम्बार दोहोयाउनहोुस् । जस्तै म ठिक हुनेछु । सजिलै रुपमा लिऔं आदि ।
← स्वस्थकर जीवनको लागि यस्ता छन् हाँस्नुका फाइदाहरु
खोप र यसका फाइदाहरु →
फ्रेवुअरी 28, 2017 जुलाई 24, 2017 साइन्स इन्फोटेक 1